फेसन | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
FiNN FLARE, तल जैकेट: समीक्षा, मोडेल र समीक्षाहरू
उच्च-गुणको कपडा सधैं यसको खरीददार भेट्टाउनेछ। र जब यो विश्व प्रसिद्ध फिनिश ब्रान्ड FiNN FLARE बाट चीजहरूको कुरा आउँछ, तब त्यहाँ कुनै श doubt्का हुन सक्दैन - को लागी यस्तो कुरा खरीद गर्न ...
महिलाहरूको जीन्सहरू पुरुषहरूको कसरी फरक पार्छ? व्यावसायिक सुझावहरू
दुबै पुरुष र महिलाले जीन्स मन पराउँछन्। सबैजना यस बयानसँग सहमत हुनेछन्। यस्तो देखिन्छ कि यी कपडाहरू युनिसेक्स छन्, किनकि ती दुबै लि on्गमा उत्कृष्ट देखिन्छन्। यद्यपि यो पूर्ण सत्य होइन। प्रिन्सिपल ...
भिटैसी - फैशनेबलहरूको लागि उच्च गुणस्तरको जूता
आज धेरै जूता निर्माताहरू छन्। ती मध्ये भिटाची छुट्याउन सकिन्छ। यस ब्रान्डका जुत्ताहरू सुन्दरता, उदासीनता र लालित्य द्वारा भिन्न छन्। यहाँ तपाइँ ठाँउ हीलको जुत्ता मात्र फेला पार्नुहुनेछ, तर ...
बच्चाहरूको लुगाहरू "Lappy Kids": समीक्षा, मूल्यहरू, वर्णन
सबै आमाबाबुले राम्ररी याद राख्दछन् कि एक रोचक, र महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो बच्चाको लागि सुरक्षित हिड्न उपयुक्त लुगाको छनौटबाट सुरू हुन्छ। र यदि तातो मौसम मा यो मुद्दा धेरै तीव्र छैन, ...
महिलाको कपडा आकार चार्ट: रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, चीन
सबै केटीहरू किनमेल गर्न मन पराउँछन्, तर त्यहाँ त्यस्तो परिस्थितिहरू हुन्छन् जब यो खुशीको अक्षम्य हुन्छ। जब तपाइँले धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ वा बच्चासँग बस्नुपर्दछ, व्यावहारिक रूपमा आफैंको लागि समय हुँदैन, र यसबाट ...
"च्यानल" - स्टाइलिश र आत्मविश्वासी महिलाहरूको लागि सूट
शास्त्रीय अर्थमा, चनेल महिला सूट दुई टुक्रा ट्वीड हुन्छ। यसले स्कर्ट र ज्याकेट समावेश गर्दछ। प्रसिद्ध डिजाइनरले तर्क गरे कि आदर्श विकल्पले दुबै पुरुष र महिला दुबै संयोजन गर्नुपर्छ ...
पुरुषहरूको लागि ह्याट्स: प्रकार र वर्णन। मानिसको लागि टोपी कसरी छनौट गर्ने?
पुरुषहरूको लागि टोपी प्राचीन समयदेखि नै उनीहरूको उद्देश्यका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। उनीहरूलाई धन्यवाद, बलियो लिंगका प्रतिनिधिहरू चिसो मौसम, तातो र अन्य वायुमण्डलीय घटनाबाट बचे। यस समयमा टोपीहरू बन्यो ...
लोफरहरू: यो के हो र केसँग तिनीहरू लगाउनु पर्छ
फेसन यति छिटो परिवर्तन हुँदैछ कि कहिलेकाँही सबै नयाँ उत्पादनहरूको ट्रयाक राख्न गाह्रो हुन्छ। यस लेखमा, हामी लोफर्सको रूपमा यस्तो वार्डरोब विस्तारको बारेमा कुरा गर्नेछौं: तिनीहरू के हुन् र तिनीहरू के के साथ परिपक्व छन् ...
डाउन ज्याकेट मिस फोफो: कसरी छनौट गर्ने, ख्याल गर्ने र गुणवत्ता समीक्षा
जाडो जादुई घटना र रमाईलो गतिविधिहरूको समय हो। हिंडाई, स्कीइ,, जाडो फोटो शुट, र केवल क्रिस्पी सेतो हिउँमा पसलमा जान पाउनु आनन्दको कुरा हो। र यो खुशी हो ...
जुत्ता र कपडाको स्वच्छता। लुगा र जुत्ता हेरचाह
स्वच्छता लामो समयदेखि सौन्दर्यको अवधारणाको हिस्सा रह्यो। अनुहार, शरीर, घर, कपडा र जुत्ता हेरचाह सामान्यबाट बाहिरको चीज बन्द भएको छ - यी साधारण दैनिक प्रक्रियाहरू हुन् जसले स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्दछ। महत्व ...
लुगाहरू "Faberlik": ग्राहक समीक्षा
लुगाहरू एक अलमारी तत्व हुन्, जुन बिना कुनै महिलाले जीवनको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। मुख्य कुरा किनमेल गर्दा गल्ती गर्नु हुँदैन। चीजहरू दुबै सुन्दर र उच्च गुणवत्ताको हुनुपर्दछ। तपाईंको भुक्तान गर्नुहोस् ...
स्टकिंग आकारहरू कसरी छनौट गर्नुहोस् ताकि उनीहरू देख्न सकून्
प्रकाशित 15.09.2019 14.11.2019
पहिलो नजरमा, यस्तो देखिन्छ कि टाईटहरूको चयनमा त्यहाँ कुनै गाह्रो छैन। धेरै केटीहरू निश्चित छन् कि तिनीहरू जान्दछन् कसरी ठीक स्टोकिंग साइज रोज्ने। तपाईं कसरी यस्तै छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंसँग निरन्तर हुँदैन ...
Oversized कोट: के लगाउने? सामान्य सिफारिशहरू।
ओभरसाइज शैली महिलाहरूको लागि एक सरल र सुविधाजनक कपडा विकल्प हो जसले आफूलाई केही सीमाहरूमा राख्नको लागि थकित हुन्छन्। फेसनल दिशा ब्यागी आउटफिट हो, यदि कसैको काँधबाट लिइएको हो भने। विशेष स्थान ...
BASK - महिला र पुरुषका लागि डाउन ज्याकेट: समीक्षा
विशाल ग्रह भर मौसम मौसम सबै ठाउँमा फरक छ, र कहीं मान्छे असहनीय तातो को लागी अनुकूलित गर्न को लागी, कहीं कडा नियमित काम्प का अनुभव गर्न को लागी, र कहीं कम तापमान, चिसो र तूफान को सामना गर्न को लागी ...
एक खैरो स्कर्टको साथ के गर्ने? फैशनका लागि सुझावहरू
परम्परागत रूपमा, खरानी तटस्थ कालो को लागी एक नरम विकल्प को रूप मा देखिन्छ। यो कार्यालय, अनौपचारिक, औपचारिक र स्पोर्टी लुकमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। यो सबै कसरी आकार र पूरक शेडहरूसँग खेल्ने मा निर्भर गर्दछ।
के प्रेमको घोषणा को गहना को लागी साधारण टुक्रा मा एन्क्रिप्टेड गर्न सकिन्छ? हो, यदि यो दुई प्रेमीहरूको लागि लटकन हो भने, जो एक व्यक्तिले छनौट गर्दछ जुन उसको प्राण जोडी र संसारलाई स्वीकार गर्न चाहन्छ ...
30 लाई साथीको लागि के दिने: सर्वश्रेष्ठ उपहार छनौट गर्नुहोस्
Years० बर्ष गम्भिर वार्षिकोत्सव हो। यद्यपि यो उमेर होईन जसलाई केटीले लुकाउन आवश्यक पर्दछ, र यसैले छुट्टी प्राय: ठूलो मात्रामा मनाइन्छ। यदि तपाईंलाई यस्तो उत्सवको लागि आमन्त्रित गरिएको थियो भने, ...
आश्चर्यजनक बिरालो आँखा धूपको चश्मा
सनग्लास "बिरालाको आँखा" मर्लिन मुनरोको सर्वश्रेष्ठ वर्षहरूदेखि लोकप्रिय भएका छन्। र अहिले सम्म, यस प्रकारको फ्रेम विश्वभर महिलामा माग रहन्छ। सबै पछि, प्रत्येक ...
मुसलमान धेरै धार्मिक छन्। इस्लामिक संस्कृतिका प्रतिनिधिहरू धर्मका नियम र कानूनको कडाईका साथ पालन गर्छन्। यी नियमहरूमा टोपीका महिलाले लगाउनु पर्ने अनिवार्य समावेश गर्दछ जुन आफ्नो कपाल ढाक्छ। अरब वार्डरोबको परम्परागत तत्व मध्ये एक ...
54 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 38,799 प्रश्नहरू।